KDE Plasma 5.12 LTS ikozvino yawanikwa pamwe nekuwanda kwekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
KDE Plasma 5.12 LTS ikozvino yawanikwa pamwe nekuwanda kwekuvandudza
Vagadziri veyakakurumbira KDE desktop nharaunda vane marefu matafura, nhasi iyo kusvika kweshanduro 5.12 iyo ichave nerutsigiro rurefu (LTS).
KDE Plasma 5.12 LTS ndiyo yechipiri vhezheni nerutsigiro rwakawedzerwa kubvira Plasma 5 ichiburitswa, yekutanga yaive KDE Plasma 5.8 LTS uye yakaunza kuwanda kwakawanda maererano nekusimba uye kuita. Mune ino vhezheni nyowani tichawana "kumhanya uye kureruka" zvinoenderana nechinyorwa chepamutemo.
KDE Plasma 5.12 LTS, yakanangana nekugadzikana, kuita uye kugadzikana
KDE Plasma 5.12 LTS inotarisa mukuvandudza kudzikama nekuita kwenzvimbo uye zvakare inogadzirisa mamwe matambudziko akange aunzwa mushanduro dzakapfuura. Kunyangwe isu tichigona kuwana dzimwe shanduko, iyi vhezheni haina kutarisa kune nhau.
Zvinoenderana nechinyorwa chepamutemo, ivo vaita kodhi yekuchenesa iyo yakakurumidza desktop kutanga uye nekuvandudza kuita kwese. Plasma ikozvino inoshandisa zvishoma CPU uye RAM zviwanikwa.
Sezvatakambotaura kare, hapana akawanda matsva maficha mune ino vhezheni yezvakatipoteredza, zvisinei, zvinoonekwa kuti yakanangana nevashandisi nemaLTS masisitimu, saka kuongororwa kweshanduko kubva mushanduro dzekare kunopihwa.
Zvichida ruzivo rwakanyanya kukosha rweiyi vhezheni ndiyo kutsigira Wayland, iyo protocol nyowani yekugadzirisa windows, kunyangwe vazhinji vachiri kushandisa Xorg uye zvirokwazvo izvi hazvizoshanduke chero nguva munguva pfupi.
Vagadziri vakavimbisa kuti ivo vacharamba vachiburitsa ekugadzirisa ekugadzirisa zvine chekuita neWayland mukati meiyi vhezheni, mashandiro senge kutenderera kwescreen, otomatiki kutenderera, yakazara skrini ye windows, otomatiki sarudza yemunyori, pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kuyedzwa izvozvi.
Muvhidhiyo iri pamusoro iwe unogona kuona shanduko dzese kuKDE Plasma 5.12 LTS, vhezheni ichagara kwemakore mazhinji nerutsigiro runoshanda, saka zvakakodzera kuyedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KDE Plasma 5.12 LTS ikozvino yawanikwa pamwe nekuwanda kwekuvandudza
Yakakura, inotaridzika kunge yakanaka. Nenzira iyo Nhasi vhezheni 1.20 yeMATE yakaburitswawo!
Ndakaiisa mangwanani ano paKubuntu uye ini ndaona kuti inopedza ndangariro shoma pane iyo vhezheni yapfuura uye kutanga kwacho kunokurumidza.
Isa iyo Jdownloader download maneja pane Linux